Faka umshayeli we-TP-LINK TL-WN725N (v2) i-adapter ye-Wifi ku-Debian nakwezinye izinto | Kusuka kuLinux
Umngani uthenge i- I-adapter ye-Wifi TP-LINK TL-WN725N (v2), kepha akakwazanga ukuthola indlela yokufaka abashayeli, ngenhlanhla kuye laba bashayeli bayadedelwa futhi basebenze ku-Debian, Ubuntu, Linux Mint kanye nezinye.
Siyihlolile, ngemuva kokufakwa okulula futhi iziphatha kahle, le adaptha inconyelwa kakhulu ngentengo yayo ephansi, ukutholakala kwayo okukhulu nosayizi wayo omncane. Inconyelwe ilaptop yakho, ithebhulethi kanye namakhompuyutha wakho wedeskithophu.
Izici eziphawuleka kakhulu zale adaptha yilezi:
Isivinini sokudlulisa esisheshayo esifika ku-150Mbps esifanele ukusakaza izingcingo zevidiyo noma ze-inthanethi
Ukuphepha okuthuthukile: Isekela i-64/128 WEP, WPA, PA2 / WPA-PSK / WPA2-PSK (TKIP / AES).
Ithuba lokuziphatha njenge-Wi-Fi hotspot
Izinyathelo zokufaka umshayeli we-adaptha ye-Wifi TP-LINK TL-WN725N (v2)
Inqubo ilula futhi isebenza kunoma yikuphi ukusatshalaliswa okususelwa ku-Debian, Ubuntu, Linux Mint phakathi kwabanye.
Vula i-terminal bese ubuyekeza / ufake i-GIT: sudo apt-get install –reinstall build-essential git
thola ukubuyekeza apt-get install linux-headers - $ (uname -r) apt-get update apt-get install build-essential
Landa umshayeli kusuka ku-GIT: git clone https://github.com/ilnanny/TL-WN725N-TP-Link-Debian.git
Iya kufolda lapho ilandwe khona:cd TL-WN725N-TP-Link-Debian
Kuhlanganise: make all
Faka: sudo make install
Layisha imodyuli entsha ku-kernel: insmod 8188eu.ko
Xhuma i-adapter ye-wi-fi kwimbobo ye-usb etholakalayo.
Bheka ukuthi i-adaptha ifakiwe kuhlu: ifconfig
Qala kabusha, Kungenzeka ukuthi awudingi ukuqala kabusha ikhompyutha, ngokwenza kungasebenzi inethiwekhi kuMphathi weNethiwekhi uphinde uyisebenzise futhi, uzobona ukuthi ukuhola okuluhlaza okwesibhakabhaka kwe-adaptha kuyakhanya futhi sekuzoba khona ukuxhumana kwe-Wi-Fi. Ungakwenza futhi nge-console ngomyalo: sudo service network-manager restart
Ngiyethemba ukuthi abasebenzisi abane-adaptha I-TL-WN725N, lolu lwazi lusizo kakhulu kuwe. Khumbula ukuthi ukwenza lezi zinyathelo kunconywa ukuthi ikhompyutha yakho ixhumeke ngekhebula kunethiwekhi ene-Intanethi.
Uma kwenzeka ungenayo i-intanethi, ngincoma ukuthi ufunde izindatshana ezilandelayo ezizokusiza kakhulu:
I-PSC (Isikhungo Sesoftware Ephathekayo) thatha amakhosombe akho uwahambise ekhaya
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Faka umshayeli we-Wifi adaptha TP-LINK TL-WN725N (v2) ku-Debian nakwezisuswayo
Umbuzo owodwa… Futhi iyiphi i-firmware esebenzisa leyo adaptha ye-WiFi? Kusukela ngigcina ukubona ngaleyo adaptha ye-WiFi, ngiyakhumbula ukuthi ibisebenzisa i-Atheros A9271 firmware, kanti iDebian ine-firmware ephathelene ne-Atheros etholakalayo, engisebenzele nge-TP-Link TL-WN722N. Ngisho nomshayeli wamahhala we-ath9k_htc ungisebenzisela izimangaliso.
i-firmware rtl8188eu, kimi kwenye ukusatshalaliswa kwe-linux kungisebenzele nomshayeli we-ath, kepha kulokhu ku-pc yomngani wami, kuphela engabelana naye okungisebenzele
Nina bafana, ngithenge i-tp_link tl-wn823n (inguqulo 2.0 EU) ukwenza ngcono ukwamukelwa kwesiginali kwebhokisi lami le-android tv kepha bekungenjalo. Umshini ubonwa yibhokisi le-tv kepha awusebenzisi njenge-eriyali futhi okuholelekile akukhanyi. Ngabe kukhona engingakwenza? Ingabe ikhona inqubo yokuhlela uhlelo lwe-android tv box yami? Ngiyabonga kusengaphambili.
Sawubona angazi ukuthi ibhokisi lisebenza kanjani, ngethemba ukuthi umsebenzisi angasisiza ngalowo mbuzo.
Ngiyaxolisa ukusho ukuthi ayikho indlela kimi yokufaka i-adaptha ye-TL-WN823N ejabulisayo futhi ngilandele zonke izinyathelo zesifundo. Olunye usizo.
Sawubona Unjani? Ngiyazi ukuthi sekuyisikhathi eside kusukela lokhu okuthunyelwe kodwa ngisanda kungena ezweni leLinux; Nginenkinga efanayo: empeleni ngine-adaptha ezi-2 i-TL-WN725N ne-TL-WN823N, zombili ngiwasebenzisa ngaphandle kwezinkinga ku-OSX naseWin, kepha ngithanda ukuzisebenzisa ku-Debian Linux ngoba ngine-cpu lapho ngivivinya khona uhlelo Ayinayo ikhadi elingenantambo futhi ngifuna ukufaka noma iyiphi yalezi adaptha ezi-2 ezingenantambo ze-USB. Ngokusobala umshayeli ofanayo usebenzela womabili amamodeli okungenani womabili ku-OSX naku-Windows. Ngilandele inqubo yokufaka umshayeli njengoba kukhonjisiwe lapha kule Posi kepha ekugcineni nginephutha ngoba ayingivumeli ukuthi ngikopishe kufolda / lib / firmware, le folda ayikho futhi yingakho iphutha ngicabanga kodwa angikwazi ukuyakha Ngokwami ​​ngoba ivikelwe, ngisho nemiyalo enikezwe njengomsebenzisi "wezimpande" ayikuvumeli ukwenziwa kwale folda futhi angikwazi ukuqeda ukufakwa ,,, Yimiphi imibono yokuthi ungayixazulula kanjani le mininingwane? imikhonzo nokubonga
URamiro Castillo kusho
Isifundo esihle kakhulu. Kungisize kakhulu. Ngixhumene noDebian
Phendula uRamiro Castillo
Sawubona, ngabe kukhona owaziyo ukuthi kungani ngingenakukwazi ukufinyelela ekhasini eliyinhloko lemodemu ye-TL-WR850N kusuka kusiphequluli noma nge-telnet, ngibeka:
$ ifoni ip
Ukungena ngemvume akulungile.
Ngendlela, ngikwazi ukungena kwi-inthanethi ngokuphelele kwi-Ubuntu pc yami. Kwamanye amadivayisi we-Android ngifaka iphasiwedi efanayo futhi ngiphinde ngixhume kwi-inthanethi
Ungayifaka kanjani imibala ikhonsoli ye-MySQL / MariaDB